PPR, Pe, PP Single rukoko kana Multi-rukoko Pipe Co-extrusion Production Line - China Qingdao Xinquan Plastic
PPR, Pe, PP Single rukoko kana Multi-rukoko Pipe Co-extrusion Production Line
Kuvaka, kupisa uye mvura inenge kushandisa PPR nenyere. mutopota ichi aizokwanisa kugadza nyore, pasi mutengo uye munyoro, chiedza uremu, vakachengeteka uye yakachena, nemishonga kupisa, uori, kunze kupisa uye refu kushandiswa.
* The extruder inotongwa PLC kana tembiricha controller kusvika chaiwo uye yakarurama tembiricha kutonga, iro zvikuru runovimbisa plasticization vanokwanisa; Special akagadzirirwa sikuruwa chendangariro mukuru Kushanda uye yakakwirira goho; The High Rigidity uye pasi ruzha bevel rachulis anosimbisira akavimbika uye yakatsiga extrusion kuita uye upenyu hurefu basa;
* The Distributor pamusoro Die musoro kuti PP, PPR, Pe nyere rakagadzirwa kupinda zononoka maitiro kana bhasikiti maitiro. The guru nzvimbo ruchiyerera kunovimbisa imwe uchagarireiko nguva yakakwana mashoko; kuti pombi zvinogadzirwa zviri zviduku womukati mupfungwa uye kumeso penyika; pamasikiro Foroma kuri kumusoro mukana wokushandiswa, zviri anokwanisa richigadzirisa mhando dzose PP, Pe, PPR nyere (mbiri-layer-rukoko matatu kana mana rukoko).
The multi-rukoko mutopota kugadzirwa mutsetse ndiyo kambani yedu richangobva dzakabudirira muchina, kutora 3-rukoko mutopota dzaFord Somuenzaniso, yomukati uye dzokunze akaturikidzana vanoshandisa zvinhu zvitsva, uye yepakati rukoko anoshandisa zvishandiswezve mapurasitiki + internet girazi zvinhu, zvakagadzirwa ichi zvikuru kunowedzera simba uye tensile kuti nyere, panguva iyoyowo kudzikisa kugadzirwa mutengo.
Pipe dhayamita mm 90-315MM 110-450 250-630 400-800 630-1200
Kukwanisa makirogiramu / h 200-400 250-450 250-450 300-500 300-500 400-600 600-1000 600-1100 600-1200 800-1300
Akagadzawo simba KW 200 250 250 300 300 350 400 450 500 600
Previous: HDPE dhayamita Large Hollow Wall ichitenderera Pipe (Under-pasi abudise Pipe) Production Line
Black Pipe For Kunwa Water
Corrugated abudise Pipe
Corrugated Plastic abudise Pipe
Flat abudise Pipe
Zvichienderana Irrigation Pipe
Perforated abudise mutopota
Plastic Flat abudise Pipe
Plastic vanosendamira Pipe
Popular Ppr Pipe Sizes Chati
Ppr Plastic Zvikwepa
PVC abudise Pipe
PVC Zvikwepa For Water
Labyrinth donhwe kudiridza bhandi dzaFord
Inner cylindrical donhwe kudiridza mutopota producti ...
Insert ndiro donhwe kudiridza mutopota dzaFord
HDPE dhayamita Large Hollow Wall ichitenderera Pipe (U ...
Pe Carbon Spiral yanyatsosimba Pipe Production Line